Daboolka daruurta: astaamaha, noocyada iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
La daruuraha waa mid ka mid ah doorsoomayaasha cimilada ee maalin walba la barto. Muhiimad weyn ayey leedahay in la ogaado saadaasha hawada. Daruuruhu ma aha oo kaliya inay muujinayaan roobab iyo duufaanno, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan saadaasha hawada ee gobol. Maanta waxaa lagu yaqaan habab badan si loo saadaaliyo cimilada dhici doonta iyo daruuraha ayaa door muhiim ah ka ciyaara.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha, noocyada iyo muhiimadda daruuraha.
2 Daruur jawiga ku jirta
2.1 Daruuro sare
2.2 Daruuraha dhexdhexaadka ah
2.3 Daruuro hooseeya
3 Muhiimadda daruuraha
Daruuraha waa isku-uruurinta uumiga biyaha oo ka dhasha qaboojinta hawada. Bilowga samaysanta daruurtu waxay ku bilaabmaysaa ficilka qorraxda iyo dhacdooyinka falaadhaha ku dhaca jawigeenna. Marka falaadhaha qorraxdu ay kululeeyaan dhulka dushiisa, sidoo kale hawada ku hareeraysan. Markay hawadu bilawdo inay kordhiso heerkulkeeda wuxuu noqdaa mid cufan, sidaas awgeed waxay u egtahay inay kacdo oo bedesho hawo qabow oo jooggeeda ah. Taas bedelkeeda, dusha sare ee dhulka, hawo qabow ayaa mas'uul ka ah beddelka hawada kulul ee soo baxday. Markay sare u kacdo hawadu kor u kacdo, waxay la kulantaa lakabyo qabow oo sababa inay bilaabaan inay yareeyaan heer kulka.
Sidaa darteed, markay gaadho lakabka qabow ee hawo, heerkulkiisu wuu yaraadaa oo wuxuu ku dhammaadaa isku-uruursiga uumiga biyaha. Uumiga biyaha uma muuqan karo isha qaawan oo si joogto ah ayuu jawiga ugu jiraa. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay ka kooban yihiin biyo aad u fudud iyo dhibco baraf ah, waxay awoodaan inay ku sii jiraan hawada hawo iftiin toosan leh. Hawo yar oo toosan oo ku filan in dhibcaha biyaha iyo barafka ay ku hayaan hawada.
Farqiga u dhexeeya qaabeynta noocyada kala duwan ee daruuraha badanaa waxaa ugu wacan heerkulka ay hawadu ka soo baxday dhulka dushiisa oo uriya. Waxaa jira daruuro ku samaysma heerkul hoose iyo kuwo kale oo kuwa sare ah. Heer-kulka qaab-dhismeedku wuu hooseeyaa, daruurkuna wey sii weynaataa. Waxay kuxirantahay nooca daruurta iyo xaaladaha cimilada, nooc ka mid ah ama noocyada kale ee roobabka.
Daruur jawiga ku jirta
Haddii heerkulka ay hawadu ururinayso uu aad u hooseeyo, daruurta samaysmaya waxay ka kooban tahay kristantar baraf ah. Cunsurka kale ee saameeya sameynta daruurtu waa dhaqdhaqaaqa hawada. Daruuraha la abuuray markii hawadu waxay ku jirtaa nasashada waxay umuuqataa lakab ama lakab. Dhinaca kale, kuwa ka samaysma inta u dhexeysa dabaysha ama hawada leh mowjado taag daran waxay soo bandhigaan horumar toosan oo weyn. Badanaa tan dambe ayaa ah sababta roobka iyo duufaannada.
Aynu aragno waa maxay noocyada daruuraha ee kala duwan qaabka ay leeyihiin:
Iyagu waa daruurahaas oo samaysma joogga sare dhammaantoodna waxay saadaaliyaan wax ku saabsan saadaasha hawada. Aan aragno astaamaha daruuraha dhaadheer:
Cirrus: Waa daruuro cad, hufan oo aan lahayn hooska gudaha. Waxay u muuqdaan sida loo yaqaan "dabo faras." Iyagu waa wax aan ka badnayn daruuro ay sameeyeen kristantarro baraf ah dhererka laga helay awgeed. Waxay u eg yihiin fiilooyin dhaadheer oo dhuuban oo leh qayb ka yar ama ka yar qaab joogto ah oo ah qaab xarriiqyo is barbar socda Waxaa lagu arki karaa iyadoo indhaha qaawan oo cirka fiirinaya oo la arkayo sida ay umuuqato in cirku lagu rinjiyeeyay buraashyo. Haddii cirka oo dhan ay ku daboolan yihiin daruuraha cirrus, waxay u badan tahay in 24-ka saac ee soo socda isbeddel fiiqan oo cimilada la kulmi doono. Guud ahaan, badanaa waa isbeddellada hoos u dhaca heerkulka.
Cirrocumulus: Daruurahaani waxay sameysmayaan qiyaas isdaba-joog ah oo u eg dusha laalaabka. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qaabab wareegsan sida haddii ay yihiin jajab yar oo cudbi ah. Daruuruhu gebi ahaanba way cadyihiin iyagoon soo bandhigin wax hoos ah. Markay samadu u muuqato inay qarisay daruuraha noocan ah, waxaa la sheegaa inay caajiso. Waxay la mid tahay tolidda idaha. Noocyada daruuraha ahi waxay muujinayaan in cimiladu is beddeli doonto ugu yaraan 12 saacadood haddii ay ka soo muuqdaan darbiyada daruuraha ku wareegsan. Had iyo jeer ma muujinayaan isbeddelkan markan.
Cirrostratus: Waxay u muuqdaan jaleecada hore sida xijaab ay adag tahay in la kala saaro faahfaahinta. Mararka qaarkood geesaha waa la dareemi karaa maadaama ay dherer iyo ballaadhan yihiin. Si fudud ayaa loo aqoonsadaa maxaa yeelay waxay samaystaan ​​halo cirka hareeraheeda qorraxda iyo dayaxa labadaba. Waxay u muuqdaan inay ku dhacaan daruuraha cirrus waxayna muujinayaan in cimilo xumo ama weji diiran ay imanayaan.
Aynu aragno waa maxay noocyada daruuraha ee lagu soo saaro celcelis ahaan dherer ahaan:
Altocumulus: Waxay yihiin daruuro qaabkeedu u eg yahay qaab-dhismeed aan caadi ahayn. Daruurahaani waxay ku sameeyaan jajabyo iyo isbedel ku dhaca qaybtooda hoose. Altocumulus wuxuu tilmaamayaa in cimilada xun ay bilaabato roobab ama duufaano awgood.
Altostratus: Waa daruuro qaabkoodu u yahay lakab khafiif ah iyo lakabyo kale oo aad u cufan. Qorraxda badanaa waxaa lagu arkaa lakabkan daruuraha muuqaalkeeduna wuxuu la mid yahay kan dhejiska aan caadiga ahayn. Waxay keenaan roob aan aad u xooganeyn oo ay sababaan hoos u dhaca heerkulka.
Daruuro hoose waa kuwa ugu dhow dhulka dushiisa waxaana la soo saaraa oo keliya marka roob la abuuro. Waxa ugu badan ee caadiga ahi waa in marka jawi fiican la helo daruuro hooseeya ma jiraan. Aan aragno waxa ay yihiin:
Nimbostratus: Waxay u muuqdaan sida lakab madow oo caadi ah oo mugdi ah lehna heerar kala duwan oo madmadow. Sababtoo ah cufnaanta ayaa ku kala duwan daruuraha oo dhan. Waxay caan ku yihiin roobabka gu’ga iyo xagaaga. Waxaa sidoo kale laga heli karaa roobab qaab baraf ah.
Qalooca Iyagu waa kuwa leh undulations la mid ah dhululubo dheereeya. Waxay sidoo kale leeyihiin xoogaa fiiq-fiiq ah oo ku jira midabbo kala duwan oo cawl ah. Waa dhif iyo naadir inay roob keenaan.
Strata: Waa daruuro leh qaab cirro cirro leh oo aan lahayn qaab dhismeed qeexan. Waxay kuxirantahay cufnaanta aag kasta oo daruurta ah, qaababka qaar oo leh heer mugdi ama kayar oo mugdi ah ayaa lakala saari karaa. Markay heer-kulku hooseeyaan bilaha ugu qabow sannadka, waa daruuro sii joogi kara ku dhowaad maalinta oo dhan waxayna ku siinayaan muuqaal muuqaal mug leh muuqaalka. Iyagu waa halyeeyadii maalmihii daruuraha aadka loo jeclaa.
Cover Cloud waa doorsoomaha cimilada ee si qoto dheer loo barto si loo ogaado saadaasha hawada xilligan. Sidoo kale, waxay muhiimad weyn uleedahay sawir qaadista dayax gacmeedka. Waana in dayax gacmeedyada aan ku shaqeyneyn shucaaca infrared aysan waxtar lahayn marka daruuraha gobolku sareeyo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto daruuraha iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruur